Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay Dalka. – XAMAR POST
Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay Dalka.
By Mohamed Abdi Last updated Mar 9, 2022
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kaddib safar uu maalmihii la soo dhaafay uu ku joogay dalka Qadar, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kala hadlay Amiir Tamiim binu Xamad, dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee Dowladda Qatar ay ka waddo Soomaaliya iyo dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee dalkeenna, isu socodka badeecadaha iyo dadweynaha, horumarinta Waxbarashada Hoose/Dhexe ee Soomaaliya iyo dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida.
Sidoo kale, Diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee Madaxweynaha ku weheliyey safarkan iyo dhiggooda Qadar ayaa wadajir u lafo-guray aayaha iyo miro-dhalka xiriirka Labada Dal iyo danaha wadajirka ah ee ku aaddan xasilloonida iyo horumarka Gobolka, si loo sii xoojiyo iskaashiga mugga weyn ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qadar.
Faah-faahin:- Dagaal dhimasho iyo dhaawac ka dhashay oo ka dhacay Beledweye
Galmudug oo shaacisay jadwalka doorashada kuraas ka mid ah Golaha Shacabka